Mareykanka oo Dib u celiyay Markabka USS Nimitz Sabab la xiriirta Cabsi uu ka qabo Iiraan! – Banaadir Times
By banaadir 4th January 2021 124 No comment
Mareyanka ayaa ku dhawaaqay qorshe dib loogu celinayo Marka lagu magacaabo USS NIMITZ oo ah nuucyada qaadi kara Diyaaradaha Dagaalka oo todobaadkii tagay soo gaaray Xeebaha Soomaaliya si uu qayb ugu noqdo howlgalka Xukuumadda Washington ee Bariga Dhexe & Badweynta Hindiya iyo bixitaanka Askarta Ameerikaanka ah ee Joogta Soomaaliya.
Warbaahinta Gudaha ayaa tebisay in Mareykanka ay lasoo deristay cabsi la xiriirta in Dowladda Islaamiga ah ee Iiraan ay waxyeeleyn karto, maadaama ay ku guda jirto xusuus sanadeedka koowaad ee dilkii Mareykanka uu u geystay Hoggaamiyahoodii dhanka Ciidanka Qaasim Suleymaani.
Markabkaan ayaa la rumeysan yahay in dhammaadkii bishii November 2020 uu soo gaaray Biyaha Gacanka, balse Mareykanka ayaa si cad u sheegay dhammaadka December 2020 in USS Nimitz uu soo gaaray Biyaha Soomaaliya, waxaana la hadal hayay qorshaha bixitaanka Askarta Ameerikaanka oo uu Trump wacadka ku maray in uu bixinayo Bartamaha Bishaan Janaayo 2021.
Markabka lagu magacaabo USS Nimitz ayaa aad loo ilaaliyaa, maadaama dushiisa ay ku degen karaan Diyaarado aad u badan, isla markaana daqiiqad gudaheed uga duuli karaan haddii loo baahdo in ay wadajir u fuliyaan howlgalka markaas soo baxa, waxaana la socda askar katirsan Ciidanka Badda Mareykanka oo aad u ilaaliya.
Xukuumadda Washington ayaa qorsheyneysa in Soomaaliya ay ka saarto Ciidamo ka jooga, abaabulkaas waxa uu xooggeystay kadib markii labo kamid ah maraakiibta dagaalka gaar ahaan kuwa daabula Gaadiidka, Diyaaradaha & saanadda kale ay adeegsadaan ay soo gaareen Biyaha Soomaaliya.
Mareykanka ayaa sheegay in xitaa haddii Askartiisa uu kala baxo Soomaaliya in aysan joogsan doonin howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab, maadaama saldhig uu ku leeyahay Dalalka Jabuuti & Kenya oo ay ka degen yihiin xeryo ciidan sida Magaalada Xeebeedka Manda Bay oo mar Al-Shabaab ku weerartay.
Musalsal Af Somali Maria&Mustafa Qeybtii.21aad